Umaki: isigaba sabasebenzi
NgoLwesine, Septhemba 6, 2007 NgoMsombuluko, Mashi 18, 2013 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ubungeke ungibambe etafuleni lami kuze kube yi-9AM noma kamuva. Akukona ukuthi ngisebenze sekwephuzile… ukuthi umsebenzi wami ubusebenza kimi ukwedlula indlela ebengisebenza ngayo. Kungenzeka impela, bekungumsebenzi omuhle umuntu angathola lapha maphakathi nentshonalanga. Embonini yesoftware, ngingabaphonsela inselelo abantu ukuze bathole okungcono. NgangiwuMphathi woMkhiqizo nenye yezinkampani ezikhula ngokushesha -